प्राणीहरुका आँखामा भएका प्राकृतिक दुरबिन रहस्य, कसको हेर्ने शक्ति कति ? | Birat Khabar
हाेमपेज > रोचक प्रसंग > प्राणीहरुका आँखामा भएका प्राकृतिक दुरबिन रहस्य, कसको हेर्ने शक्ति कति ?
अबिजाल बिष्ट १५ फाल्गुन २०७३, आईतवार February 26, 2017 रोचक प्रसंग, समाचार	0
विराटनगर । कतिपय प्राणीले प्रकाशको त्यस्तो तरंगलाई पनि देख्न सक्छन् जुन तरंगलाई मानिसको आाखाले ठम्याउनै सक्दैन । त्यतिमात्र होइन, कतिपय प्राणीमा अस्वाभाविक दृष्टि क्षमता पनि हुन्छ जसले गर्दा निकै टाढा टाढा पनि स–साना बस्तुहरु वा त्यसका सुक्ष्म गतिविधिहरु पनि सजिलै ठम्याउन सक्छन् ।
एउटा आँखामा दश हजार लेन्स
मानिसको आाखामा एक–एकवटा लेन्स हुन्छ । तर कतिपय किराहरुको आाखाको बनोट अत्यन्तै जटिल हुन्छ र त्यसको प्रत्येक आाखामा हजारौं लेन्सहरु हुन्छन् । ड्रयागन फ्लाईको भने दशौं हजार लेन्सहरु हुन्छन् । यसले गर्दा यो किराले एकै ठाउामा बसेर टाउको वा शरीर नघुमाइकन पनि चारै दिशामा रहेका हरेक बस्तुलाई देख्न सक्छ । यस्तो आाखाले प्रकाशमा हुने सानोभन्दा सानो परिवर्तनलाई पनि ठम्याउन सक्छ । त्यसैकारण आफनो वरिपरि हुने अत्यन्तै सुक्ष्म गतिविधिलाई पनि यस्ता आाखा भएका किराले थाहा पाइहाल्छ र उडिहाल्छ । बारुला, मौरीले भने प्रकाशको परावैजनी किरणलाई देख्न सक्छ, जसलाई हाम्रो आाखाले भने देख्न सक्दैन । त्यस्तो किरणलाई हेर्नका लागि मानिसले विशेष उपकरणको सहायता लिनुपर्ने हुन्छ । फूलहरुमा त्यस्तो विशिष्ट चिन्ह हुन्छ जुन चिन्ह परावैजनी किरणमा मात्र देखिन्छ । वैज्ञानिकरुका अनुसार फूलमा हुने त्यस्ता विशिष्ट चिन्हले किराहरुलाई फूलतर्फ आकर्षित गर्नुका साथै बिरुवाहरुको परागसेचन गर्ने कार्यमा समेत दिशा निर्देश गर्छ ।
कसको हेर्ने शक्ति कति ?
शिकारी चराहरुको हेर्ने शक्ति मान्छेको भन्दा धेरै नै राम्रो र तीक्ष्ण हुन्छ । एउटा बाजले एक हजार मिटर टाढाबाट भुइामा बसिरहेको परेवालाई सजिलै देख्न सक्छ भने उडिरहेको परेवालाई १६ सय मिटर परबाट देख्न सक्छ । यदि मानिसले त्यति दुरीबाट त्यो परेवालाई हेर्नुपरेको खण्डमा उसलाई कम्तिमा पनि ६ गुना शक्तिशाली दुरबीनको सहायता चाहिन्छ । यसको तुलना कुकुरसाग गर्ने हो भने कुकुरको हेर्ने शक्ति अति कम हुन्छ । एउटा कुकुरले हिंडिरहेको मानिसलाई ५ सय देखि ७ हजार मिटरको दुरीसम्मबाट मात्र देख्न सक्छ । अझ उस्तै लुगा लगाएका मान्छेहरुका बीचमा रहेको आफ्नो मालिकलाई उसले १ सय १० मिटरको दुरीभित्रबाट मात्र चिन्न सक्छ । त्योभन्दा परबाट उसले आफ्नो मालिकलाई हेरेर चिन्न सक्ने क्षमता हुादैन ।
१ सय १० मिटरको दुरीको आधारमा मानिसको हेर्ने शक्तिलाई अन्य प्राणीको हेर्ने शक्तिसाग तुलना गर्ने हो भने मानिसको आाखाले १ सय मिटरको दुरीमा १ दशमलव ६५ सेन्टिमिटर ब्यास भएको चक्कालाई देख्न सक्छ भने त्यतिकै दुरीबाट बिरालोले ७ दशमलव ८ सेन्टिमिटर ब्यास भएको चक्कामात्र देख्न सक्छ ।
संसारकै आकर्षक झण्डा नेपालको, यस्तो छ इतिहास
सर्वोच्चमा निर्वाचन विवाद
विराट खबर २६ बैशाख २०७८, आईतवार
भोकै र समस्यामा परेका बिरामीका कुरुवालाई हरेक साझ निःशुल्क खाना–लायन्स क्लब अफ बिराटनगर एक्जिक्युटिभ १० जेष्ठ २०७८, सोमबार
शुक्रबार बेलुका ५ बजेसम्म नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान ६ जेष्ठ २०७८, बिहीबार
प्रदेश १ मा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ बृद्धि, १२ सय थपिए, स्थिती भयाबह ५ जेष्ठ २०७८, बुधबार
उपमेयर मृत्यले सप्तरीमा १८ स्थानीय निकाय बुधबार बन्द ५ जेष्ठ २०७८, बुधबार
संक्रमण रोक्नका लागि नयाँ चेक जाँच गर्न स्थानीय स्रोत परिचालन र थप कडाई–आयल निगम प्रहरी ४ जेष्ठ २०७८, मंगलवार
नक्कली स्टिकर टाँस गरी औषधी बिक्री बितरण गर्ने मेडिकल औषधी पसल संचालक सहित २ जना पक्राउ २६ बैशाख २०७८, आईतवार
कुटपिटबाट १ जनाको मृत्यु २६ बैशाख २०७८, आईतवार
चट्याङमा परी १ जनाको मृत्यु, २ जना घाईते २६ बैशाख २०७८, आईतवार
नेपालमा हालसम्मकै सर्वाधिक कोरोना संक्रमित–पछिल्लो २४ घन्टामा मात्रै ७२११ संक्रमित थप १९ बैशाख २०७८, आईतवार
सोमबार रातिदेखि आन्तरिक र २२ गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने सरकारको निर्णय १९ बैशाख २०७८, आईतवार